Yusuf Garaad: Madaxweyne ma isaga guurnaa?
Gobolka Uttar Pradesh ee India ugu dadka badan waxaa ku nool 204 milyan oo ruux. Nigeria oo Afrika ugu dad badan, Gobolka Kano oo ah kan ugu sii dadka badan 36-da Gobol ee Nigeria, waxaa ku nool in ka badan 9 milyan. Labada mas’uul ee fadhiya labada caasimadood ee Gobolladaas waa Allahabad, UP, iyo Kano, midkoodna ma aha Madaxweyne.
Madaxweyne aan u talin Dowlad madax bannaan ee maamula Gobol ama Gobollo, isla markaana Madaxweyne kale hoos taga waxaan ka barannay Ethiopia. Ha la iska daayana lagu deyn maayo.
Markii horeba ereyga Madaxweyne ma ahayn eray qurxoon oo Madax weyn xikmaddu ma aha. Ee waa u sarreyn. Haddana waa la sii macna dilay oo waxaa jira dhowr Madaxweyne oo isku dhererinaya xilka Madaxweynaha Qaranka.
Marka maaddaama Dastuurka hadda dib loo eegayo, maxay kula tahay in Dowlad Goboleedyada loo daayo derejadaan ay janteen ee Madaxweyne, isla markaana Madaxa Qaranka loo raadiyo magac kale. Madaxweynaha Qaranka ma ula bixi karnaa kelmadda carabiga ah ee sawaxiliguna uu adeegsado ee Ra’iis? Ahna ereyga aan isleeyahay markii horeba waa meesha laga soo tarjumay ereyga Madaxweyne.
Hadday taasi dhacdo, marka la maqlo Ra'iiska ayaa yiri ama yimid, waa la kala garan lahaa ma'suulka laga hadlayo, qof kale oo ku jago ahina dalka ma jireyo.
Arrintani kuma wajahna Gobol gooni ah ee waa Dowlad Gobleedyada oo dhan, kuma wajahna qabiil gooni ah ee xilalku waa meerto. Midda saddexaadna kuma saabsana xilliga maanta aan joogno oo keliya ee waa mustaqbalka Dowladnimadeenna.
Waad ku mahadsan tahay in aad akhrisay. Fadlan aragtidaada ku reeb qeybta hoose ee isla boggan.
Posted by Yusuf Garaad at 14:21:00